Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda dilal ka kala dhacay Muqdisho iyo Baledweyne | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda dilal ka kala dhacay Muqdisho iyo Baledweyne
Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda dilal ka kala dhacay Muqdisho iyo Baledweyne
Muqdisho (Halqaran.com) – Al-Shabaab ayaa durba sheegtay masuuliyadda dilka wiil dhaqtar ahaa oo xalay lagu toogtay Degmada Dharkeenley, xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo aheyd meel farmashiye ah.
Wiilka dhalinyarada ee Dhaqtarka ahaa ayaa lagu magacaabi jiray Dr. C/llaahi Yusuuf Suudaani waxaana xarun dadka lagu daaweeyo oo Farmshiye ah uu ku lahaa degmada Dharkeenley, waxaana masuuliyadda dilkaas sheegatay Al-Shabaab oo qirtay in ay ka dambeeyen.
Ururka Al-Shabaab ayaa dusha u saaray wiilkaasi inuu ka tirsanaa Ciidamada Sirdoonka dowladda, gaar ahaan qaybta dharcadka, balse eheladiisa qaar ayaa arrintaasi been abuur ku tilmaamay.
Wiil qaraabo dhaw la‘ah Dhaqtarka la gu dilay Dharkenleey ayaa warbaahinta u sheegay inay tahay war been abuur ah hadalka ka soo baxay Al-Shabaab ee lagu sheegay in Dr. Cabdullaahi uu ahaa Askari ka tirsan Nabad Suggida.
Allaha u naxariistee Marxuumkan ayaa wuxuu Jaamacad uga soo baxay dalka Sudan, halkaasi uu ku soo bartay Cilmiga Caafimaadka.
Sidoo kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay, mas‘uuliyadda dilal ka dhacay Ceelasha Biyaha iyo Magaalada Baledweyne, halkaasi oo ay ku dileen Askar ka tirsan dowladda.
Dilal ka dhacay Muqdisho